Ragnarok (2020) – Gold Channel Movies
2Season2May. 27, 2021
Brothers in Arms May. 27, 2021
What Happened to the Nice, Old Lady? May. 27, 2021
Power to the People May. 27, 2021
God Is God, Though All Men Death Had Tasted May. 27, 2021
Know Yourself May. 27, 2021
All You Need Is Love May. 27, 2021
ကျွန်တော်တို့ အခုသိထားကြတဲ့ Odin, Thor, Loki နဲ့ Vali တို့လို နတ်ဘုရားတွေက နော်ဝေနိုင်ငံက ဒဏ္ဍာရီထဲကနေ ဆင်းသက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Odin တို့ Thor တို့ကိုတော့ အများစုက Marvel ကနေ စပြီးတော့သိကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ragnarok ဆိုတဲ့ နာမည်ကလည်း နော်ဝေစကားဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ နတ်ဘုရားတွေ သေကြေပျက်ဆီးကြရတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားကို ဆိုလိုပါတယ်။ Ragnarok ရဲ့ အဆုံးသတ်ကတော့ နတ်ဘုရားတွေ သေကြေတဲ့အထိ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး ရေမြုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
Edda လို့ခေါ်တဲ့ မြို့တစ်မြို့မှာ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ရေခဲတွေက ဘယ်သူမှမထင်မှတ်ထားတဲ့ နှုန်းနဲ့ကို တော်တော်လေး အရေတွေပျော်နေခဲ့တာပါ။ အခုလိုရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် ဆောင်းရာသီမှာတောင် ပူလာပြီးတော့ တစ်ခါတစ်လေကျရင်လည်း အလွန်အေးနေခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးရာသီဥတုအရမ်းဆိုးရွားလာနေတဲ့အတွက် တစ်ချို့တွေကတော့ နောက်ထပ် Ragnarok ဆီကို ဦးတည်နေပြီလို့ ယူဆနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင် တစ်ယောက်ယောက်ကတော့ တားမှကိုဖြစ်ပါတော့မယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Fantasy, Mystery ဖြစ်ပြီးတော့ Imdb မှာလည်း လူပေါင်း ၂ သောင်းကျော်က ပေးထားတဲ့ Rating 7.5 အထိရှိနေပါတယ်။ အားလုံးလည်း နော်ဝေနိုင်ငံက ဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတာကို သိကြမှာပါ။ အေးခဲနေတဲ့ ရာသီဥတုရယ်၊ တောင်တွေကြားက အိမ်လေးတွေရယ်နဲ့ အရမ်းလှတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုပါ။ အခုလိုမျိုး နတ်ဘုရားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရိုက်လိုက်ရင် အများစုက နာမည်ကြီး မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေနဲ့ ဟောလိဝုဒ်လက်ထွက်တွေဖြစ်တတ်ပေမယ့် Ragnarok မှာကတော့ Scandinavian လို့ခေါ်တဲ့ Denmark, Norway နဲ့ Sweden နိုင်ငံ ၃ခုက မျက်နှာသစ်သရုပ်ဆောင်တွေ အများကြီးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ စကားပြောကလည်း နော်ဝေဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်မျိုးဖြစ်နေမယ့်အပြင်ကို နော်ဝေဂျီယန်ဒဏ္ဍာရီထဲက နတ်ဘုရားတွေအကြောင်းကို နော်ဝေသားတွေက ရိုက်ကူးထားတာဆိုတော့ ဒီနတ်ဘုရားတွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ Series တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Season 1 Translated by Tun Tauk Nyo Lwin
Season2Translated by MaryChrist, Kay C & Lai Laii
plaquenil dosageSeptember 27, 2021Reply
whatismodafinilSeptember 26, 2021Reply
roaccutane side effectsSeptember 26, 2021Reply
bactrimSeptember 26, 2021Reply
prednisolonSeptember 26, 2021Reply
prednisone side effects in dogs prednisolone for cats
ThelmaSeptember 24, 2021Reply
AudrySeptember 23, 2021Reply
clonopine meaningSeptember 19, 2021Reply
plaquenil buy online plaquenil coupon hydrochoriquine
DessieSeptember 18, 2021Reply
zithromax for bladder infection is zithromax penicillin zithro
AaronSeptember 13, 2021Reply
MarkSeptember 12, 2021Reply
QuyenSeptember 12, 2021Reply
FranciscoSeptember 12, 2021Reply
KristenSeptember 10, 2021Reply
CamilleSeptember 10, 2021Reply
ReinaSeptember 9, 2021Reply
HenriettaSeptember 9, 2021Reply
CliffordSeptember 9, 2021Reply
MozelleSeptember 9, 2021Reply
BryceSeptember 9, 2021Reply
JuanaSeptember 9, 2021Reply
AnaSeptember 9, 2021Reply
RoderickSeptember 9, 2021Reply
ElvinSeptember 9, 2021Reply
PollySeptember 9, 2021Reply
GlorySeptember 6, 2021Reply
asmr it‘s lovely price enough for me.
JacintoSeptember 4, 2021Reply
Great article, exactly what I asmr was, bit.ly,
CorazonSeptember 3, 2021Reply
My page – asmr with
NoraSeptember 2, 2021Reply
your blog and will eventually come back in scoliosis surgery the foreseeable future.
HsueAugust 31, 2021Reply
hydroxychloroquinemlAugust 31, 2021Reply
chloroquine phosphate tablets chloroquine why is hydroxychloroquine
MagdaAugust 30, 2021Reply
Also visit my blog why quest bars (j.mp)
hydroxychloroquine 200 mg highAugust 19, 2021Reply
chloroquine natural sources https://chloroquineorigin.com/# hydroxychloroquine 200 mg
GLASXYJuly 10, 2021Reply
S2 link လေးတွေပြန်ပြင်ပေးပါလား
VictorJune 29, 2021Reply
Jeg Elsker Ragnarōk
Min htetMay 28, 2020Reply
SanphyolwinMarch 19, 2020Reply